နေအိမ် > COVID-19 အချက်အချာ > SIL ပံ့ပိုးသူ COVID-19 အချက်အလက်
SDA အတွက် COVID-ဘေးကင်းသော အစီအစဉ်
လက်ရှိ စောင့်ရှောက်မှု အဆောက်အဦ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့် အာဏာပိုင်များထံမှ အခြားသော လမ်းညွှန်ချက်များကို တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် SDA ဝန်ဆောင်မှုအဆင့်များသည် သက်ရောက်မှုရှိပါသည်-
နောက်ဆုံးပေါ် Care Facilities လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ ဧည့်သည်ကန့်သတ်ချက်များ ထားရှိထားပါသည်။ ပိုမိုသိရှိနိုင်သည် ဒီမှာ
အစည်းအဝေးများနှင့် အိမ်ငှားစီမံခန့်ခွဲမှု ဝန်ဆောင်မှုများသည် လူနှင့် ၎င်းတို့၏ မိသားစု၏ လိုအပ်ချက်များကို အကောင်းဆုံးဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် လူကိုယ်တိုင် သို့မဟုတ် အဝေးမှ ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
ပစ္စည်းထိန်းသိမ်းခြင်းဝန်ဆောင်မှုများသည် စံပြုကူးစက်မှုထိန်းချုပ်ရေးအစီအမံများအောက်တွင် ထားရှိထားပါသည်။
နေထိုင်သူအသစ်များမှ SDA သို့ စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ပြောင်းရွှေ့ခြင်းများကို စံကူးစက်မှုထိန်းချုပ်ရေးအစီအမံများအောက်တွင် လုပ်ဆောင်နိုင်သည် - အာဏာပိုင်များ၏ လိုအပ်ချက်အရ အချို့သောကန့်သတ်ချက်များ သက်ရောက်နိုင်သည်ကို သတိပြုပါ။
အလုပ်သမား သို့မဟုတ် အိမ်ငှားရောဂါကူးစက်မှု သို့မဟုတ် COVID-19 နှင့် ထိတွေ့မှုဟု သံသယ သို့မဟုတ် အတည်ပြုထားသော ရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ActiveSDA စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ထံ ချက်ချင်းအကြောင်းကြားရန် SIL ဝန်ဆောင်မှုပေးသူအား ကျွန်ုပ်တို့ တောင်းဆိုထားသည်။
ပင်မဝင်ပေါက်နေရာများတွင် ဆိုင်းဘုတ်နှင့် လက်ဆေးသည့်ရေစင်များ နေရာချထားခြင်းအပါအဝင် SDA တစ်ခုစီအတွက် Covid-Safe Plan ကို ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
SIL ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများသည် ဆိုင်းဘုတ်နှင့် လက်သန့်စင်ဆေးရည်များကို အဝင်ပေါက်နေရာများနှင့် အိမ်ခန်းတစ်လျှောက် လိုအပ်သလို ထိန်းသိမ်းထားကြောင်း သေချာစေရမည်။
SIL ဝန်ထမ်းများသည် အလုပ်သမားများ၊ ကန်ထရိုက်တာများနှင့် ဧည့်သည်များထံမှ ကြေငြာချက်တစ်ခု အပြီးသတ်ရန် ဆက်လက်တောင်းဆိုပြီး အချက်အလက်ကို ၂၈ ရက်ကြာ ထိန်းသိမ်းထားရမည်ဖြစ်သည်။
မသန်စွမ်းအလုပ်သမားများအတွက် PPE ဝတ်ဆင်ခြင်း။
မသန်မစွမ်းလုပ်သားများအတွက် PPE ဆိုင်ရာ အပ်ဒိတ်အချက်အလက်များအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ အဆိုပါနေရာကို သွားပါ။ DHHS ဝဘ်ဆိုဒ်.
သို့မဟုတ် နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက်၊ ကျေးဇူးပြု၍ DFFH COVID အဆင်သင့်နှင့် တုံ့ပြန်ရေးအဖွဲ့သို့ အီးမေးလ်ပို့ပါ။ REMpolicy&engagement@dffh.vic.gov.au
ActiveSDA သည် ဝင်ပေါက်ချဉ်းကပ်လာသူတိုင်းကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နိုင်စေရန် SDA အဆောက်အဦတစ်ခုစီ၏ ပြင်ပနံရံ သို့မဟုတ် တံခါးတွင် ထားရှိရန်လိုအပ်သည့် ဆိုင်းဘုတ်ကို ထုတ်လုပ်ထားသည်။
အစားထိုး ဆိုင်းဘုတ် လိုအပ်ပါက ActiveSDA စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။
စောင့်ရှောက်မှု အထောက်အကူပြု လမ်းညွှန်ချက်များ
ActiveSDA တွင် လက်ရှိ Care Facilities Directions များကို SDA တစ်ခုစီအတွင်း အကောင်အထည်ဖော်ကြောင်း သေချာစေရန် SDA အော်ပရေတာအဖြစ် တာဝန်များရှိသည်။
ActiveSDA သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ SIL ပါတနာများနှင့် တိုင်ပင်ပြီး စောင့်ရှောက်မှု အထောက်အကူပြု လမ်းညွှန်ချက်များကို လည်ပတ်လုပ်ဆောင်ပါမည်။
COVID-19 ပျံ့နှံ့မှုကို ကန့်သတ်ရန်အတွက် လက်ရှိ စောင့်ရှောက်မှု အထောက်အပံ့များ လမ်းညွှန်ချက်များသည် နေထိုင်သူများ၏ သုခကို ဆန့်ကျင်သည့် ဗိုင်းရပ်စ်ပျံ့နှံ့မှုကို ကန့်သတ်ရန် လိုအပ်မှုကို ဟန်ချက်ညီစေရန်အတွက် SDA သို့ ကန့်သတ်ဝင်ရောက်ခွင့်ကို ပြဌာန်းထားသည်။
လူတစ်ဦးသည် မိမိကိုယ်မိမိ သီးခြားခွဲထားရန် လိုအပ်သည်။ Quarantine, Isolation and Testing Order; သို့မဟုတ်
လူတစ်ဦးသည် ဥပဒေအရ သီးသန့်ခွဲထားရန် လိုအပ်သည်။ Quarantine, Isolation and Testing Order; ဒါမှမဟုတ်
SDA သို့ဝင်ရောက်ရန်ကန့်သတ်ချက်များဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်များအပြည့်အစုံကိုကျေးဇူးပြု၍ လက်ရှိ Care Facilities လမ်းညွှန်ချက်များကို ဖတ်ပါ။.
အတည်ပြုထားသော အမှုတွဲတစ်ခုနှင့် အဆက်အသွယ်ရှိနေသည် (အခြေအနေများတွင် သင့်လျော်သော တစ်ကိုယ်ရည်ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းကိရိယာအဆင့်ကို ၀တ်ဆင်ထားစဉ် ၎င်းတို့၏အလုပ်တွင်မှလွဲ၍)
7 ရက်မတိုင်မီ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပြီး အနီးကပ်ထိတွေ့သူမဟုတ်ပါက၊ သို့မဟုတ်
14 ရက်မတိုင်မီ လူသည် ကာကွယ်ဆေး အပြည့်အစုံ မထိုးရသေးပါက သို့မဟုတ် နီးကပ်စွာ ထိတွေ့ပါက၊ နှင့်
လောလောဆယ်တွင် မိမိဘာသာ သီးခြားခွဲထားရန် သို့မဟုတ် မိမိကိုယ်တိုင် သီးသန့်ခွဲထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ Quarantine, Isolation and Testing Order.
COVID-19 ဖြစ်ပွားမှု ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ်များ
ActiveSDA သည် SIL ဝန်ဆောင်မှုပေးသူတိုင်းနှင့် ဆိုက်-သီးသန့် Covid-19 ဖြစ်ပွားမှု ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် လုပ်ဆောင်နေသည်။
အိမ်တွင်ဖြစ်ပွားမှု ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ကဏ္ဍများကို ဆွေးနွေးရန် ActiveSDA စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။
SDA တွင် ဝန်ဆောင်မှုအဆက်မပြတ်ရှိကြောင်း အာမခံသည်။
Haven အကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး သဘောတူညီချက်ကို အပြီးသတ်ပြီးပါက၊ အိမ်၊ ဘေးကင်းပြီး SIL ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ၊ ဤသဘောတူညီချက်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုအရည်အသွေး၊ ဘေးကင်းမှုနှင့် ဆက်လက်တည်တံ့မှုအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏တာဝန်ဝတ္တရားများကို ပြည့်မီရန် အတူတကွလုပ်ဆောင်ရန် မူဘောင်ကို ဆက်လက်ပံ့ပိုးပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့မဟုတ်ပါက အကူးအပြောင်းအစီအစဥ်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုအဆင့် သဘောတူညီချက်များ အကျုံးဝင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် NDIS ပါဝင်သူများအား ကျွန်ုပ်တို့၏ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ပံ့ပိုးကူညီမှုများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ ဆက်လက်တည်မြဲနေစေရန်အတွက် SIL ဝန်ဆောင်မှုပေးသူတိုင်းနှင့် အနီးကပ်လုပ်ဆောင်ပါမည်။
NDIS ကော်မရှင်သည် မှတ်ပုံတင်ထားသော ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများကို အသုံးပြုသင့်သည်ဟု အကြံပြုထားသည်။ ပွဲပုံစံ အသိပေးချက် - COVID-19 (မှတ်ပုံတင်ထားသော ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ) အသိပေးအပ်ပါသည်။ NDIS အရည်အသွေးနှင့် အကာအကွယ်ပေးရေးကော်မရှင်နာသည် COVID-19 ဖြစ်ပွားမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အပြောင်းအလဲ သို့မဟုတ် ဖြစ်ရပ်များ။
SDA အဆောက်အဦအတွင်း ရောဂါပိုးထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို လိုက်နာရပါမည်။ ၎င်းတို့တွင်-
လက်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာ ပရိုတိုကောများ (လက်ကိုဆေးကြောပြီး ဆိုဒ်မ၀င်မီ၊ အတွင်းနှင့် ပြီးနောက် လက်ဆေးပါ)
ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေး အဆောက်အအုံများသည် တစ်ချိန်တည်းတွင် အများသူငှာ မျှဝေသုံးစွဲနိုင်သော နေရာများတွင် နေထိုင်နိုင်သည့် လူအရေအတွက်ကို ကန့်သတ်ထားသည့် သိပ်သည်းမှု ကန့်သတ်ချက်များကို လိုက်နာရမည်ဖြစ်သည်။
ကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်များ၏ အကြံပြုချက်နှင့်အညီ SDA ပရဝုဏ်အတွင်း သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ခြင်း။
အာဏာပိုင်များထံမှ အကြံဉာဏ်များနှင့်အညီ သီးခြားခွဲထားခြင်းနှင့် quarantine protocol များကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း။
ActiveSDA သည် COVID-19 ကူးစက်ခံထားရသူ သို့မဟုတ် အတည်ပြုသူတိုင်းအပါအဝင် NDIS ပါဝင်သူများအတွက် သင့်လျော်သောနေရာထိုင်ခင်းပေးရန် SIL ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့် လက်တွဲလုပ်ဆောင်ရန် ကတိပြုပါသည်။
NDIS ပါဝင်သူများနှင့် ဆက်သွယ်ခြင်း။
SIL ပံ့ပိုးပေးသူသည် Haven ကိုကူညီလိမ့်မည်။ နေအိမ်တွင် ပါဝင်သူတစ်ဦးနှင့် ၎င်းတို့၏မိသားစုနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံရန် လုံခြုံစိတ်ချရသောအချက်မှာ-
COVID-19 စီမံချက်နှင့် အာဏာပိုင်များထံမှ လမ်းညွှန်ချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း။
SDA ၏ အရည်အသွေးနှင့် ဘေးကင်းမှုကို ပံ့ပိုးပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ COVID-19 ဗျူဟာများ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို လွယ်ကူသော အင်္ဂလိပ်နှင့် ရရှိနိုင်သည့်ပုံစံများဖြင့် အချက်အလက်အပါအဝင် နေထိုင်သူ တစ်ဦးစီ၊ ၎င်းတို့၏ မိသားစုနှင့် အုပ်ထိန်းသူများထံ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဆက်သွယ်နိုင်ရန် SIL ဝန်ဆောင်မှုပေးသူတိုင်းနှင့် ကျွန်ုပ်တို့ လုပ်ဆောင်ပါမည်။
ကျေးဇူးပြု နောက်ဆုံးရအချက်အလက်များအတွက် DHHS ဝဘ်ဆိုဒ်သို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။ မသန်စွမ်းသူများအတွက် အရင်းအမြစ်များ။
ဖုန်း : 1300 428 364
နာရီပြီးနောက်: 1300 012 226
ဆိပ်၊ Home၊ Safe သည် အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းစဉ်များကို ကန်ထရိုက်တာများအား အကြံပြုထားသည်။
ကန်ထရိုက်တာများသည် ပိုင်ဆိုင်မှုထိန်းသိမ်းမှုပြုလုပ်ရန် SDA နေအိမ်သို့ တက်ရောက်ရန် သင့်လျော်သောအချိန်ကို စီစဉ်ရန် SIL ဝန်ဆောင်မှုပေးသူကို ဆက်သွယ်ပြီး မတက်ရောက်မီ ဖုန်းခေါ်ဆိုကာ ဆိုက်ရှိ သံသယ သို့မဟုတ် အတည်ပြုထားသော COVID-19 နှင့် ထိတွေ့မှုအကြောင်း မေးမြန်းပါမည်။
ကန်ထရိုက်တာများသည် ဆိုက်ရှိ SIL အလုပ်သမားများထံမှ စာရေးသားကြေငြာချက် ပြီးဆုံးခြင်းအပါအဝင် ကူးစက်မှုထိန်းချုပ်ရေးအစီအမံများကို လိုက်နာရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။ SIL ပံ့ပိုးပေးသူသည် ကူးစက်မှုထိန်းချုပ်ရေးအစီအမံများကို နေရာချထားပြီး ကန်ထရိုက်တာမှ လိုက်နာကြောင်း သေချာစေရန် တောင်းဆိုထားသည်။
ကန်ထရိုက်တာများသည် COVID-19 ရှိကြောင်း အတည်ပြုထားသော ဆိုက်များကို တက်ရောက်မည်မဟုတ်ဘဲ Haven ကို အကြံပေးပါမည်။ အိမ်ပြန်ရောက်ရင် ဘေးကင်းပါစေ။
ဆိပ်၊ အိမ်၊ ဘေးကင်းပြီး တက်ကြွသောဝန်ထမ်းများသည် လိုအပ်သလို လိုအပ်သလို SDA နေအိမ်များသို့ တက်ရောက်မည်ဖြစ်ပြီး လိုအပ်သလို ကူးစက်မှုထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခပ်ခွာခွာနေရေးအစီအမံများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်ရာအဖွဲ့သည် တယ်လီဖုန်းနှင့် အတုအယောင်ဆက်သွယ်ရေး (Zoom၊ Skype၊ Facetime စသည်) တို့မှလည်း ရရှိနိုင်ပါသည်။
SDA Residency Agreements ၏ စီမံအုပ်ချုပ်မှုသည် လူနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစု၏လိုအပ်ချက်များကို အကောင်းဆုံးဖြည့်ဆည်းပေးရန်အတွက် လူကိုယ်တိုင် သို့မဟုတ် အီလက်ထရွန်းနစ်စာရွက်စာတမ်းလက်မှတ်ထိုးခြင်းကို အသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်။
အရေးပေါ် စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ် နှင့် ရွှေ့ပြောင်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်
COVID-19 နှင့်စပ်လျဉ်း၍ လူနေအိမ်တစ်ခုစီအတွက် အရေးပေါ်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဥ်များနှင့် အစီအမံများကို ဖြစ်ရပ်တစ်ခုချင်းစီအလိုက် ပြန်လည်သုံးသပ်ပါသည်။
SIL ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများသည် နေထိုင်ရာတစ်ခုစီအတွက် လက်ရှိအရေးပေါ်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ကို ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊
Haven မှ အကြောင်းကြားသောအခါ အရေးပေါ်လေ့ကျင့်မှုများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ အိမ်၊ ဘေးကင်းသည်။
အရေးပေါ် ရွှေ့ပြောင်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
လိုအပ်သူများအတွက် Personal Emergency Emergency Evacuation Procedure (PEEP) ကို ဖော်ဆောင်ခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း
နေရာပြောင်းရွှေ့ရန် လိုအပ်လာသောအခါတွင် SIL ပံ့ပိုးမှုများ ဆက်တိုက်ပြုလုပ်ရန် စီစဉ်ခြင်း။
SIL ပံ့ပိုးပေးသူသည် ပါ၀င်သူတိုင်းအတွက် PEEP တစ်ခုစီအတွက် တာဝန်ရှိပါသည်။
COVID-19 အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းဖြင့် SDA နေအိမ်အတွက် အရေးပေါ် ရွှေ့ပြောင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် SIL ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများထံမှ ထည့်သွင်းချက်ကို ရှာဖွေနိုင်သည်-
ထိခိုက်လွယ်သောပါဝင်သူများအတွက် သင့်လျော်သော ရွှေ့ပြောင်းရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊
အရေးပေါ်အခြေအနေ သို့မဟုတ် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုတွင် ပါဝင်သူများအတွက် ပံ့ပိုးကူညီမှုများ အဆက်မပြတ်နှင့် သင့်လျော်သောနေရာထိုင်ခင်း။
NDIS ကော်မရှင်ထံ အကြောင်းကြားစာ
SDA ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့် SIL ပံ့ပိုးပေးသူများသည် ဥပဒေနှင့်အညီ NDIS ကော်မရှင်ထံ အကြောင်းကြားရန်နှင့် အကြံပြုထားသည့်အတိုင်း၊ ပွဲပုံစံ - COVID-19 (မှတ်ပုံတင်ထားသော ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ) ၏ အသိပေးချက်တွင် NDIS ကော်မရှင်။
အာဏာပိုင်များ၏ ညွှန်ကြားမှုအတိုင်း၊ ActiveSDA ၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေသော ဝန်ထမ်းများအားလုံးကို Covid-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးထားသည်။ </p
ဓနသဟာယ ကျန်းမာရေးဌာန ဝဘ်ဆိုက်တွင် မသန်စွမ်းသူများနှင့် အလုပ်သမားများအတွက် COVID-19 ကာကွယ်ဆေး အရင်းအမြစ်များနှင့် အချက်အလက်များ ရှိသည်။
မသန်မစွမ်းဝန်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးအချက်အလက်
COVID-19 ကာကွယ်ဆေးအကြောင်း မသန်စွမ်းသူများအတွက် အချက်အလက်
မသန်စွမ်းလုပ်သားများအတွက် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးအချက်အလက်
Dina Faragalla - SDA ပရိုဂရမ်ညှိနှိုင်းရေးမှူး
လူအုပ်- 0419 872 793
Rachel Gellatly, အထွေထွေမန်နေဂျာ Operations – North
လူအုပ်- 0417 353 240
Franc De Petro၊ SDA အသွင်ကူးပြောင်းမှုနှင့် လိုက်နာမှုဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းရေးမှူး